Izindaba - Zinc Alloy Emblems & Badges
Zinc Ingxubevange Izifanekiselo & Amabheji
Ingxubevange yeZinc yinto eguquguqukayo kakhulu enomkhawulo omncane, uma kuqhathaniswa ne- izikhonkwane zethusi koqweqwe lwawo, izifanekiselo ze-zinc alloy & amabheji kubiza kakhulu ikakhulukazi uma ubukhulu be-oda bukhulu noma usayizi wephini mkhulu. Ngobheji omkhulu wosayizi omkhulu we-zinc, ungaba mncane ngesisindo esincane. Singenza amabheji e-zinc alloy pin anesisindo esingaphansi kuka-1kg. Ngokusebenzisa umjovo ekubumbeni ukusetshenziswa kwe-zinc alloy, lapho idizayini inezindawo eziningi zokusika ngaphakathi, i-zinc alloy iyindlela engcono kakhulu ngaphandle kokunqunywa okungaphezulu. Ngenkathi lezo zikhonkwane zethusi, izikhonkwane zensimbi, izikhonkwane eziphrintiwe ezinokusikwa kwangaphakathi noma izindawo ezivulekile kuphela zingenziwa ngemali ekhokhwayo yokusika edingekayo. Ngaphandle kwezikhonkwane ezisikiwe, i-die casting zinc alloy nayo inomphumela omuhle kakhulu we-3D ukukhombisa amalogo ukukhululeka okungaphezulu noma ama-cubic kunethusi noma insimbi. Okuwukuphela kokukhetha okungabonisa ngokuphelele ngemiklamo emincane.
Imibala: mbumbulu koqweqwe lwawo olunzima, koqweqwe lwawo oluthambile noma ngaphandle kombala ogcwele
Ishadi Lemibala: Incwadi yePantone
Qeda: igolide elikhanyayo / le-matte / le-antique / i-nickel
Iphakheji: isikhwama sephepha / ikhadi lephepha elifakiwe / ibhokisi lepulasitiki / ibhokisi le-velvet / ibhokisi lephepha
Ukuthatha izinga eliphansi kakhulu ekucabangeni, kunemikhawulo eminingana yezikhonkwane ze-zinc alloy, izinhlamvu zemali, izindondo.
** Isigaxa sethusi se-antique asitholakali ekuqedeni koqweqwe lwe-zinc alloy hard
** Isiphetho se-antique + esicwebezelayo asitholakali ku-zinc alloy
** Mbumbulu koqweqwe lwawo olunzima ngaphandle kokukhanda ngamatshe & koqweqwe lwawo oluthambile alutholakali ngemikhiqizo yasendulo ye-plating zinc alloy ngemibala ebonakalayo
** Esikhundleni se-sandblasting, ukusetshenziswa kwemboni # 2 & inkungu
Izipho Ezicwebezelayo ziyingcweti izikhonkwane ngezifiso umkhiqizi, sikhiqiza izikhonkwane ezahlukahlukene zezitayela ku-zinc alloy, ithusi, ithusi, insimbi, insimbi engagqwali, i-aluminium kanye nesiliva elihle kakhulu. Zizwe ukhululekile ukuthumela i-imeyili umklamo wakho ongakapheli kusales@sjjgifts.com. Ngokushesha nje lapho uthola umklamo wakho wangokwezifiso, ukuthengisa kwethu kochwepheshe kuzohlala kusikisela amakhasimende ngesisekelo semiklamo yawo kanye nokuqondisa, futhi sikubuyisele amabheji amahle wekhwalithi enhle.